Amaphaphu aphezulu eSobantu | Eyethu News
Amaphaphu aphezulu eSobantu
“Abanye babafundi bagcine sebeyeke isikole ngoba besabela izimpilo zabo”
Njengoba amaphoyisa engakabophi muntu kulandela isigameko sokubulawa kwabafundi basesikoleni iSobantu High School emasontweni amabili edlule, kunovalo lokuthi ukubhalwa kwezivivinyo zokuphela konyaka kungase kuphazamiseke. Loluvalo lususwa ukuthi ukubulawa kwezelamani zakwaMbatha u-Asanda no Sandile kanye no-Siyabonga Hlomuka ngokudutshulwa kumataniswa nombango wamaqembu amabili engoma Abadlovozi kanye namaRota omalunga awo afunda kulesikole.
Ekhuluma emngcwabeni ka-Asanda noSandile uthisha wakulesikole uThulani Xaba uthe bakhathezekile ngesimo esikhona ikakhulu njengoba ukushona kwabafundi kuhlanganisa umbango kubafundi. “Uma lesimo singalungiswa kungaba nomthelela ongemuhle ngoba lesikole yisona sodwa kulendawo lapho abafundi bengakhokhi mali yokufunda ngoba uhulumeni wabona amazinga obuphofu emphakathini. Uma kungakhona abafundi abangangakwazi ukuza esikoleni ngoba besabela izimpilo zabo abazali bayophoqeka ukungena ezindlekweni zokukhokhela ukuthi bayofunda kwenye indawo, akuyona into enhle leyo,” kusho uXaba.
Uthe okungaba lukhuni ukuthi abanye babafundi bagcine sebeyeke isikole ngoba besabela izimpilo zabo nokungaba nomthelela omubi emphakathini. Ukhansela Sandile Dlamini uthe bazowuqhuba umkhankaso wokuvimba isibhicongo. “Zibuhlungu izinhliziyo zethu, kodwa yize kunje esikunxusayo ukuthi kungabikho muntu ozithathela umthetho ngenxa yalesigameko. Kumele njengomphakathi sibambane silwisane nalenkinga evelile ingaze ibhebhetheke,” kusho uDlamini. Kukhalwe kakhulu ngesiteshi samaphoyisa abaningi abathe sifana nesingekho ngoba inani lamaphoyisa lincane uma kuqhathaniswa nenani lamalunga omphakathi.